KAIST - Waxbarashada sare ee jaamacadda top of South Korea
gaabinta : KAIST
Ha iloobin in aad wada hadlaan KAIST
Qor at KAIST
Martida sharafta leh, Guddoomiyaha Myung Oh; Trustees Gil-Saeng Chung iyo Sam-Soo Pyo; Madaxweynayaasha hore Soon-Dal Choi iyo Chang-Sun Hong; xubin hore ee Barlamaanka Qaranka, Mudane. Yong-Kyung Lee; Guddoomiyaha Dae-Im Kang ah Association oo ka mid ah madaxda S&T Ururada iyo madaxweyne xubin ay – Madaxweynaha Young-Myung Choi of Korea Institute of nukliyeerka Nonproliferation iyo Control, Madaxweynaha Young-Joon Kim of Gwangju Institute of Science iyo Technology; iyo Ms. Soo-Young Lee, Guddoomiyaha KAIST Development Foundation, oo aan u tudhayn iyada tamarta ee u shaqeeya KAIST garab Mr. Eung-Sun Lee, Guddoomiye Ku-xigeenka ee ku Foundation, Madaxweyne ku-xigeenka Sur-Ku Chung of KAIST School Taageeridda Association, Madaxweynaha Kwi-Roh Lee of Center been Nano Qaranka, Madaxweynaha Doo-Chul Kim of Korea Institute of Sciences Advanced, Professor Jang-Hyuk Kwon, maamulaha of Korea Science Academy, macalimiinta iyo shaqaalaha distinguished, fasalka ah 2017, ardayda soo laabtay, Qalinjabiyeyaasha, waalidiinta, aan qaraabada iyo saaxiibada, iyo ugu dambayntiina naagtiisii ​​Myoung A (my) Kang, Waxaan ugu daacad ah waad ku mahadsan tahay inaad halkan bilowgii madaxtooyada 15-KAIST.
Waayo, aniga waxaa la maanta halkan taagan yahay gaar macno leh oo ka soo dhaafay keeni xusuus badan. Sida saxda ah konton sano ka hor, bishii January ee 1963, Waxaan ku ahaa sidii enlistee cusub ee fasalka 111th ee tababar ciidan (111 rag) of Air Force Korean ah halkan Yuseong. Waxaan ku qaatay waxaa labadii bilood ee tababbarka ciidamada ee aasaasiga, iyo 9 bilood ah tababar farsamo ee isgaarsiinta elektiroonigga ah adeega qalabka. Bisha January uu ahaa si xun u qabow la heerkul ah -20 degrees Celsius - waxay ahayd si qabow ahaantii in bay Incheon la xayiray. In November lay markaas wareejiyay saldhigga ciidanka circa ee Kangneung, Kangwon-Do. Waxaan xusuustaa in sidii aan sugayay in Osan waayo diyaarad si Kangneung, Waxaan maqlay warka murugo in Madaxweyne John F. Kennedy ayaa la toogtay in la dilo in Dallas, Texas, taas oo ahayd arrin naxdin leh.
In 2002, Waxaan ahaa professor a booqanaya of KAIST iyo inta lagu jiro xagaaga si aan u farxay, ee daawashada kooxda kubada cagta Korean Qaranka ka dib yimaadaan si ay gaadhi doonaan xulka Talyaaniga awood 2:1. Si maanta, gaalda, waxaan xusuusan kuwa laba gool lama filaan ah u dhaliyay kooxda Korean, iyo dareenka kibirka qaranka iyo rajo.
maanta, Waxaan si Yuseong soo laaban si ay ugu adeegaan sida madaxweynaha cusub KAIST. Waa sharaf weyn, laakiin hawsha si ay u fuliyaan on yahay muhiimadda qaran oo adag siyaabo badan.
KAIST la aasaasay 1971 iyadoo gool ay aasaasay, sida ku cad qodobka dastuurka KAIST 1, ugu horeysay, si ay u barto iyo foster horyaalka Ingariiska saynisyahano mustaqbalka qalabaysan aragtiyaha aasaasiga ah oo adag oo awood codsiyada la taaban karo; labaad, si ay u fuliyaan labada muddo-dheer iyo muddada gaaban ee aasaasiga ah iyo ka dalbatay cilmi u saamaxaya horumarka farsamada ee qaranka istiraatiiji ah; iyo kii saddexaad, si ay u bixiyaan iskaashi cilmi leh balli kala duwan ee hay'adaha cilmi-baarista iyo warshadaha
Under banner noocan oo kale ah KAIST ayaa sababay koritaanka warshadaha sayniska iyo farsamada ee Korea for soo dhaafay 40 sano tan iyo markii ay aasaaska iyo, waxa uu noqday jaamacadda cilmi kala ah mid caalami ah loo aqoonsan yahay, si ay awood ugu fiican iyo shaqaalaha mahad ka go'an in ay cilmi-baaris aad u fiican iyo waxbarasho ee hogaamiyayaasha mustaqbalka. mahad Deep sidoo kale waxaa sabab u ah ka horreeyay aan, Dr. Nam Pyo Suh iyo Madaxweynayaasha kale hore iyo xubnaha kooxda maamulka, kuwaasoo ka shaqeynayey iyaga ka garab.
maanta, badan oo ka qalin KAIST ayaa ku darsaday caan ah sida Professor kala duwanaayeen in waxbarashada sare iyo horseedka cilmi duurka sayniska iyo injineernimada.
Just todobaad ka hor, aniga iyo xaaskeyga waan la marti qaaday in ay ka Qalinjabiyeyaasha dhaweynta KAIST Shirka wareeggeedii adag-State Caalamiga ah (ISSCC) ee San Francisco, oo waxaa ka soo qeyb badan Qalinjabiyeyaasha KAIST, ardayda hadda iyo Professor ay, iyo guests. Waxaan bartay in sanadkan mar kale, KAIST soo bandhigay waraaqo ugu ISSCC halkaas oo bar caadiga ah ee ogolaanshaha waa qaali. Tani waa hal calaamad u badan oo sida KAIST gaareen meel sarre oo cusub. The awood KAIST iyo ardayda ayaa lagu daabacay waraaqaha badan ee joornaalada kala duwan dunida-ixtiraamo sida Nature iyo Science.
KAIST waa in ay sii wadaan si ay u tagaan oo dhaafsan kuwan guulaha bilowga ah, iyo KAIST waa in ay ahaadaan engine awood leh, waayo, horumarinta dhaqaalaha iyo warshadaha ee Korea. Sidii quruun ka maqan balli qoto dheer khayraadka dabiiciga ah, Korea waa in la helo habab cusub oo caalami ah u tartamaan si loo hubiyo barwaaqada iyo fayo-qabka dadka ay. KAIST waa in ay sida ugu fiican in ay u horseedi quruuntii oo dhinaca xuduudaha ah sayniska iyo farsamada xayi ah oo masuuliyad.
In maalmaha soo socda, KAIST waa in koraan geed midho weyn berrinkii cilmi-baarista iyo waxbarashada, yahaylaguna ixtiraamo ma aha oo kaliya in Korea, laakiin dunida oo dhan. Laga bilaabo Jasiiradda Korean, xididdadiisa waa billawdaan ka baxsan xuduudaha qaranka, gudbaya shantii badaha in badan qaaradood inaan ka dhaansado in set oo hodan ah oo kala duwan fikrado-heer caalami iyo tabo cusub inay midhihiisa soo saaro - qalin si fiican u diyaarsan oo la ixtiraamo doonaa madaxda iyo qayb bulshada.
waxbarashada A dunida-xiran waa muhiim wakhtigan ganacsiga kordhaya karti by internet sare, duulista supersonic, iyo Markabka supersize. qalin KAIST waa in lagu qiimeeyaa sida hal la qoto-dheer aqoonta, -abuurka, awood for wada shaqayn xoog leh oo gaadhsiin cad la qeexan oo ku qoran luqadaha. Oo meel kasta oo ay tagaan, waxay sii wadi kartaa si ay u faafiyaan anshaxa ay, qiyamka, xirfadaha iyo aqoonta, iyo inaynu dhammaan daawan kartaa sida geedaha KAIST dunida oo ubxin.
Himilada kama danbaysta ah ee sayniska, technology iyo maamulka been ee fayo-qabka ah ee bulshadeena. Oo tanu waxay fayo-qabka waa in lagu jaamacadaha sida guryaha waxbarashada, gobollada deriska, quruuntii iyo dunida.
In dadaalka ay ku sugan this fayo-qabka bulshada, KAIST ayaa xanuun koraya iyada oo ay koboc la taaban karo. Waa in aan yareeyo xanuunka iyada oo kalsooni iyo tixgelin midba midka kale, oo ay ku biiraan in midnimada xagga berri ka sii dhalaal of KAIST qaado tallaabooyinka. Waan ku sujuudayaa doondoonow, caawimo, iyo ballan qaadayaa in fidiyey aan dadaal darafkeeda hoggaamiyaha addoon.
Waxaad ogaataan of movie la yiraahdo "Howlgalka". In filim this, ganacsade calooshiis iyo addoon ciyaaray by Robert De Niro ku kor dhaqdhaqaaqa ka nolol kacsan oo in la raaco ah kuwa is-hoosaysiiya Jesuit wadaadkii iyo naftiisa bilowdo mar kale. In mid ka mid ah goobta, De Niro oo wadaadku waa la kedis ah gabiga ah biyo-dhac yaacday. Markii ay dhameystirtay fuulid ugu adag, siday isaga la load aad u culus oo ah alaabta sida Falsau dembiyadiisa, waxay salaamay by koox ka mid ah hooyo Hindida, kaasoo gooyay alaabta iyo waxa hoos u gabiga. Inkasta oo ma fadhiisan fudud la De Niro Khasaaray waxyaabaha uu mar qiimeeyo, Kanu waa warka culus ee la qaaday ka qof walba, iyo naftooda Weeraryahanka sii.
Si aad u furtid cutubka cusub, KAIST waa wajib geesinimada sida. Halkii dooday oo eedeeyay dadka ku Samreen wixii la soo dhaafay, KAIST waa in si wadajir ah ay diiradda saaraan ay mustaqbalka iyo samayn intii karaankeeda ah si ay u fuliyaan hawlaha muhiim ah ka hor. Oo waa in aan midba midka kale in ay ka our guranayaan sii daayo kuwa wax ka dhigi doonaa waxaynu u guurnay iyo howlgalka u dhacna iyo baahneyn adag caawin. Aniga iyo xaaskayga waxaan halkaan u joognaa in aad la shaqeeyaan dhisidda KAIST aawadood oo ah quruun hooyadiis our.
Hogaamiyaha ruuxiga ah dabayaaqadii Mahatma Gandhi ka digay toddobada dembiyadii weyn. iyaga ka mid ah ugu la xiriira KAIST waa 'sayniska aan qalbi,'' Isagoo aan aqoon lahayn qof,'' Siyaasadda aan mabda ','Iyo' diinta allabari oo aan. 'Waxaan waa ku dadaalaan in ay kor u qaadaan sayniska, aqoonta, iyo qof qalbi daahir ah, mabaadi'da sarreeya iyo allabari oo doonaya.
KAIST, si ay u noqdaan hoggaamiye iyo gacan ka sayniska, technology iyo horumarinta warshadaha, waa wax wanaagsan samaysaan in shanta meelaha soo socda - kasta adkeeyay isticmaalaya shantii warqado magacaaga noo hay'ad ee.
Marka, "K" waa cilmiga abuurka. xubnaha Kulliyadda iyo ardayda maalgashadaan doonaa cilmi-horseedka si ay u abuuraan aqoon cusub iyo technology. KAIST xarumaha cilmi-taagan gudaha ee Daedeok Industrial Park iyo meelo kale iska kaashan doonaan, iyo caalamka kale la dunida oo dhan oo ay ku jiraan kuwa Silicon Valley. aqoonta abuurka High-qiimaha inta badan u baahan tahay xarumaha heer caalami iyo jawi taageero. Waxaan sameyn doonaa fiican si kor loogu qaado taageerada firfircoon iyo hawlgelinta oo ka socda dawladda iyo ururada kale ee keentay.
hoolalka Lecture iyo shaybaarrada cilmi Professor 'yihiin ceelasha aqoonta abuurka cusub. In barnaamijyada cilmi ardaygu xuddun iyo awood-keentay, dhiiriyo adag- ardayda ka shaqeeya, qalin iyo undergraduate labada, aad bay ka faa'iidaysan karaan fursado kala duwan oo u gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, dhammaantiin ma aha wax soo saar leh cilmi yihiin ardayda si toos ah A. Waxaan xusuustaa cilmi-fiican ee Jaamacadda California, Berkeley markii aan arday ka qalin ah. Isaga cilmi ahayd muhiim, iyo maalmood iyo afartan habeen uu qaatay ee tijaabo qaban shaybaarka. Waxa uu weli noqon lahaa ee uu kursiga keydka soo dhaafay saqda dhexe, xitaa haddii baaritaanka ahayd in la siiyo subaxdii dambe. Ma uusan helin oo dhan Sida, laakiin aqoonta abuurka, wuxuu ahaa kan labaad in midkoodna. Wax yar ka dib qalinjabinta wuxuu bilaabay inuu yaabiyo dunida ku xalkaas ka badan ee cilmibaaris. KAIST waa in ay qiimeeyaan iyo taageero talanti oo kale, haddii kale waa khasaare qaranka.
cilmi iskujir dhiiri doonaa sahaminta of territory untraveled halkaas oo dhagaxyo badan waxaa laga heli karaa. In jaamacadda cilmi, waaxaha tacliimeed ee shaqsiga waa in ay xarumaha heer aqoon sare. Waxaa la barbar dhigi karaa gudbikaraa kaamil ah ama kubbad. Si kastaba ha ahaatee, haddii meel aqoonta KAIST waa in la buuxiyey dhexgalaan oo kaliya, ka dibna 48% bannaan oo dhan sii joogi doono unfilled, taas oo ah meel bannaan ah si loo baadho, waayo earthshaking cilmi.
cilmi iskujir ku baaqay in xubnaha awood ka waaxaha tacliimeed oo kala duwan in ay si dhow ula shaqeeyaan jabiyay derbiyo iyo kabsaday ku haboonayn. Xardhan ee hoolka laga galo ee Bell Shaybaarka ee, Murray Hill, New Jersey waa cilmiga of Alexander Graham Bell oo weydiiyo in booqasho ku tago dhulka sahamin si aad u ogaato wax cusub.
KAIST loo baahan yahay in had iyo kor iyo cilmi taageero in ay ka qaybqaataan barnaamijyada cilmi maadooyinka at machadyada sida Institute KAIST iyo kuwa kale oo Xukuntay iyo xamaasad.
Marka labaad, "A" waxaa loogu talagalay horumarinta on Lugbuur oo dhan. On January 30, Nara-ho ayaa si guul leh bilaabay in ay goobaab caalamka si ay u soo ururin iyo gudbiyaan macluumaad ka faa'iideysan lahaa dadka oo dhan adduunka oo dhan. Oo sida Nara-ho, KAIST waa laftiisa lagu daahfuri in sare sare si ay u sameeyaan dunida meel ka fiican.
Si aad u noqoto machad caalami ah taasoo keentay, KAIST waa in ay sida ugu fiican in ay ka aamin taageerada lagama maarmaanka ah labada damiir iyo dhaqaale ahaan. Xubin kasta oo KAIST waa in ay leedahay xukun ah unshakable in wax walba la samayn karaa si fiican, in siyaabo cusub oo laga heli karo iyo in wax loo hagaajin karo. caadooyinka wanaagsan waa in la dhisay iyo joogsila'aan dhaqma. KAIST sidoo kale ka heli doontaa siyaabaha loo hagaajin lahaa guud ahaan oolnimada.
KAIST waa in la helo habab si loo xoojiyo iskaashi la Institute for Science aasaasiga ah iyo xarumaha badan ee cilmibaaris ah ee warshadaha Daedeok ku Park. Waxaa si fiican u la og yahay in guusha Silicon Valley ayaa taaba on the cilmi-baarista iyo waxbarashada ee jaamacadaha deriska ah sida Stanford ah, Berkeley, iyo San Jose State. Dean Frederick Terman of University Stanford dhiirigelinayaa iyo caawiyey William Hewlett Packard iyo David si ay u abuuraan Company ee Hewlett Packard-.
qorshaha mustaqbalka ee KAIST baahan yahay in la remade la tashanaya dhammaan dadka deegaanka iyo Guddiga Trustee. Co-lahaanshaha qorshaha noocan oo kale ah la tari karo, gaaray iyo xaqiiqsadeen la si buuxda uga qayb dhan.
Mar saddexaad, "I" waxay u taagan tahay Integrity. daacadnimadooda KAIST xaqiijin doonaa dheelitirka ah si joogto ah oo wanaagsan u dhexeeya aragtida iyo dhaqanka, xorriyadda iyo mabda ', daacadnimo iyo wada-shaqayn, iyo qiimaha iyo tallaabo. Integrity waa in la qiimeeyo oo ku dhaqma oo dhan publications cilmi, maareynta maaliyadda, iyo xiriirka aadanaha.
Dhowr sano ka hor waxaan ka qeyb galay shir caalami ah ee Kos Island, Greece. Inta lagu guda jiro safar this waxaan badan oo ku saabsan nuxurka daacadnimada bartay iyada oo loo marayo sheeko halyeeyga. Sida laga soo xigtay sheekada, sculptor ah loo sameeyey si loo soo saaro isku dhaceen si ay u xusuustaan ​​geesi la jecel yahay. Laakiin waxaa la qaadan waqti aad u dheer oo qofka mas'uul ka ah mashruuca booqday sculptor iyo warsan sababta sheyga aan loo qaadan Karin si degdeg ah u dhiibay. Isaga waxaa u muuqday in la sameeyo, laakiin sculptor ayaa sheegay in waqti dheeraad ah loo baahan yahay si uu u dhammeeyo kexeeyey. In niyad booqdaha weydiiyay cidda daryeeli lahaa inuu arko ka lalmata. jawaab sculptor wuxuu ahaa, "Ilaah My qadarin arkaa kexeeyey."
Waxaan aaminsanahay in qof ama urur la daacadnimada u adkaysan kara oo taagan tijaabada waqtiga. Integrity waa in ay dhaqan wanaagsan ah KAIST.
Mar afraadka, "S" waxaa loogu talagalay joogtaynta. Waxbarashada iyo cilmi-baarista ee KAIST waa in ugu dambeyntii ay doondoonaan runta waarta. mawduucyada Research waa isu noqdo mid waara oo aan aad u kala eryay by gool muddo-gaaban. Barnaamijka EEWS ayaa ka hadlay arrimo caalami ah oo muhiim ah in Energy, Deegaanka, Biyaha iyo Sustainability. Iyadoo guusha cilmi-baarista iyo horumarinta waara-driven, KAIST kici doonaa in ay noqdaan hogaamiye caalami ah top-kooxda golaha sayniska iyo tiknoolajiyada. cilmi Sustainability-driven Bloom doonaa under dhiirigelin badan iyo taageero. Inta badan natiijooyinka cilmi-baarista waxaa lagu cabbiraa index ganaax, laakiin aan ka yarayn muhiim u tahay tayada xaqiijiyay mid ka mid ah ee xukunka u gaar ah iyo kalsooni.
Waxaan faahfaahin karaa dhibic this by xiganaya tusaale u ah Dr. Claude Shannon kaasoo sameeyey cilmi-baarista ee AT&T Bell shaybaadhka iyo ka dib noqday professor a at MIT. Waxa uu ku Tolosnaada daabacay laakiin mid kasta oo ka publications uu ahaa jawharad. Si maanta, uu macluumaad aragti waxaa guud ahaan laga codsadaa. Waxaan u baahanahay in ay taageeraan KAIST inay tabarucaad badan waarta heerkiisa isla.
Fifthly, "T" waxaa loogu talagalay Trust. KAIST waa in ay ahaadaan hay'ad kaas oo la isku halleeyey dowladda, dadkeeda, iyo waalidiinta ardayda. Trust loo arko sida qiimaha leh sida lacag caddaan adag.
Dhaqanka aaminay waxaa suurtogal ka dhigay fahamka iyo daryeelka ka mid ah xaaladaha kale ee. Trust xidid buu yeelan doonaa joogto ah on campus sida qayb ka mid ah dhaqanka KAIST markii kuliyadda, shaqaalaha iyo ardayda, dhammaan xubnaha bulshada KAIST, dhageysto loona fahmo fikradaha badan oo kala duwan iyo fikradaha dadka kale qaban oo ay wadaagaan kasta oo kale ee guulaha iyo hambalyo u kali yeela, waayo, mid kale. Furthermore, marka aan ducaystaaye nafteena in la sameeyo qaybo noo gaar ah ee dadaalka qaranka iyo bulshada ee sayniska iyo farsamada la kibirka iyo dareen mas'uuliyadeed, waxa dib u soo ceshato iyo xoojinta kalsoonida ummadda iyo dadweynaha, iyo sidoo kale bulshada caalamka, hanato KAIST. On baaxad weyn, waxaan sidoo kale u baahan tahay in hay'ad ku kalsoon tahay in la doonteen by Professor iyo ardayda dibadda badan. Iyada oo isku halleeya, sida la aasaasay, KAIST qalin iyo dadka Korea ka heli kartaa fursado badan oo waaweyn caalamka.
Si Loo soo kobo, KAIST waa in ay u fiican in view of aqoonta abuurka, horumarinta firfircoon, daacadnimadiisa, joogtaynta iyo kalsooni.
KAIST ayaa gaaray meeshiisii ​​sida jaamacad caalami ah loo aqoonsan iyada oo taageero ka jecel oo ka mid ah dadka reer Korea. Waxaan fahamsanahay in u furnaa KAIST inuu ku biiro madaxda sare ee jaamacadaha dunida-horseedka u hawaystay by bulshada iyada oo loo marayo isbedel joogto ah iyo hal-abuurka ay tahay sida kaliya ee uu ku soo laabto jacaylka iyo taageerada qaranka, taas oo ah mid aad u howlgalka aan la odhan jiray inay qaataan sidii laygu caleemo galay madaxweynaha KAIST.
guests Sharafbadanyahay, qoyska iyo saaxiibada, Waxaan jeclaan lahaa inaan tacliiq on kaliya hal shay halkii muhiim ah ka hor inta aan hadalkayga kor u duubaan.
Last, laakiin ma ugu yaraan, Waxaan jeclaan lahaa inaan u hambalyeeyo Fasalka 2017 guulihii aad. Waxaad adkaaday tartan kulul inuu yimaado KAIST, oo aad mar Samirkoodii Dartiis iyada oo caqabado adag si ay u gaaraan dhibic this. Inkasta oo laga yaabaa in aad agonized hor inta uusan go'aan si aad u qorto halkan, aad si caqli ah u doortay. Dhammaan xubnaha qoyska KAIST ku samayn doono ay ugu fiican si loo hubiyo in aad guusha mustaqbalka sida aad u guurto ka baxsan derbiyada kuwan. albaabka My had iyo jeer waa si ballaaran u furan yahay inaad booqato, oo waxaan mar walba soo dhaweyn doono iyo qiimeeyaa su'aalahaaga, indhaynta iyo talooyin.
hen ay timaado waxbarashada iyo hanuun guud, fadlan la xaqiijiyay in Professor KAIST iyo xubnaha shaqaalaha taageerada halkan waxaa loogu talagalay ardayda iyo waxbarashadooda fiican.
Class of 2017, guul aad ugu KAIST iyo wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa in magnet ah si loo soo jiito ardayda dugsiga sare tayo waxbarashada sayniska iyo injineernimada a. Professor KAIST yihiin dad lagu daydo oo aad noqon kartaa hanuunin noloshaada-dheer iyo tababarayaasha.
Shakhsiyan, xataa in ka badan ka dib 40 sano tan iyo markii aan qalin ka Berkeley, aniga iyo xaaskeyga waan tegi booqo macalimiinta aan at Berkeley, Macalimiinta Leon Chua iyo Ernest Kuh, si wadajir ah ku raaxaystaan ​​cuntada oo ay leeyihiin wada hadalka saaxiib on qaybo badan ee nolosha. Just bishan, waxay ahaayeen ku faraxsanahay inaan maqlo in aan caleema Madaxweyne KAIST iyo siiyey fiican rabo aan door cusub ee KAIST.
guests sharafta leh Gacaliye, Waan kugu mahad naqayaa, waayo, iyagoo halkan maanta si ay u xusaan bilowgii of this cutubka cusub ee KAIST. Waxaana aaminsanahay oo aad weydiisan kartaa in aad taageero sii wadi doonaan si loo horumariyo KAIST oo ka faa'iidaysan oo dhan oo naga mid ah, quruunteenna, iyo dunida.
Department of Sciences Xisaabeed
College of Science Life & bayoenjineering
Department of Science Medical iyo Engineering
School of Farsamada, Aerospace iyo Systems Engineering
Department of Engineering Farsamada
School of barashada Kombiyuutarka
Graduate School of Web Sayniska iyo Technology
Graduate School of Security Information
Department of Bio & Engineering maskaxda
Department of Warshadaha iyo Systems Engineering
Department of Chemical Engineering iyo Biomolecular
Department of Science Qalabka iyo Engineering
Department of nukliyeer iyo Quantum Engineering
Waaxda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Engineering
Chun Shik Graduate School Cho ee Gaadiidka Green
Department of Aqoonta Service Engineering
Graduate School of EEWS (Energy, Deegaanka, Biyaha, iyo Sustainability)
College of Liberal Arts iyo Science Iswaafiqida
Department of Humanities iyo cilmiga bulshada
Graduate School of Technology Dhaqanka
Department of Management Business iyo Technology
Graduate School of Policy Sayniska iyo Technology
Graduate School of Information & Management Media
Machadka waxaa la aasaasay bishii 1971 sida Korea Institute Advanced ee Science (Kais) by amaah ah US $ 6 million (US $ 34 million 2014) ka United States Agency for International Development (USAID) oo ay taageerayaan Madaxweynaha Park Chung-Hee[ nidaamka waxbarasho ee machadka ayaa waxaa inta badan loogu talo galay by Frederick E. Terman, Madaxweyne ku xigeenka ka mid ah Stanford University, iyo Chung Geum-mo, borofisar ka tirsan Hay'adda Polytechnic ee Brooklyn. laba hawlood oo waaweyn machadka The ahaayeen si ay u tababaraan saynisyahano sare iyo injineerada iyo horumarinta qaab-dhismeedka ka mid ah waxbarashada graduate ee dalka. waxbarashada Research bilaabay by 1973 iyo undergraduate bartay waayo darajo bachelor ee 1984.
In 1981 dawladda ku biireen Machadka Korean Advanced of Science iyo Institute Korean ee Sayniska iyo Technology (KIST) si ay u sameeyaan Korea Institute Advanced ee Sayniska iyo Technology, ama KAIST. Sababo la xiriira kala duwan falsafad cilmi, KIST iyo KAIST kala qaybsamo 1989. In KAIST isla sannad iyo Institute Korea ee Technology (QALABKA) marka la isku daro oo ka Seoul u dhaqaaqay ka Daedeok Science Town inDaejeon. fal koowaad ee Madaxweynaha Suh uu caleema saarka ee July 2006 waxay ahayd inay ka soo Qorshaha Horumarinta KAIST ah. The 'Five-Sano Qorshaha Horumarinta KAIST' ayaa lagu dhamaystiray on February 5, 2007 Guddiga Steering KAIST. The gool ee KAIST dhigay by Suh ahaayeen si ay u noqdaan mid ka mid ah jaamacadaha sayniska iyo farsamada ee adduunka ugu fiican, iyo si uu u noqdo mid ka mid ah top-10 jaamacadood by 2011. Bishii Janaayo 2008, jaamacadda hoos magaceeda oo buuxa, Korea Advanced Institute of Science iyo Technology, oo magaceeda rasmiga ah in ay keliya is beddelay KAIST.
Ma rabtaa wada hadlaan KAIST ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: KAIST rasmiga ah Facebook
Ku biir si ay ugala hadlaan of KAIST.